QEEXIDA IYO SAWIRADA NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE CLEMATIS EE GOBOLKA MOSCOW - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Clematis waa warshad si fiican u eegi doonta qayb kasta oo beerta. Waa wax aan qabyo ahayn oo qabow u adkaysta.
Dhirta Kuwani waa mid aad u qurux badan oo Bloom laga bilaabo June illaa September, taas oo aan ku farxi kartaa inuu bannaanka u.
Dhibaatooyinkayagu waxay ku haboon yihiin noocyada badankooda, laakiin waxay ka fiican tahay in clematis laga dhigo gobolka Moscow, waxaan kuu sheegi doonnaa dheeraad ah.
Noocyada ugu wanaagsan ee clematis yihiin dhirta gaarka ah in bannaanka u badan oo u dagaalamaya nadiif ah ee noocyada.
Clematis - ubax waqti isku mid ah, laakiin xoog leh. Qaar ka mid ah kooxahaani ma hor istaagaan qabow daran iyo qoyan, laakiin sidoo kale waxaa lagu beeray cimiladeena. Waxaan soo qaadannay noocyo clematis ah oo loogu talagalay gobolladeena, gaar ahaan gobolka Moscow, sharraxaadkooda hoos ku qoran.
Xeerarka beerahooda waxay ku xiran yihiin xaaladaha cimilada. Tusaale ahaan, waqtiga ugu wanaagsan marka aad ku beeran kartid clematis ee gobolka Mooska waa May, markii gobollada kulul tani dhamaadka bisha Maarso iyo bilowgii Abriil.
Kooxda Clematis Zhakmana waxay ku haboon tahay jawiga gobolka Moscow. Waxay u baahan yihiin manjooyin joogto ah, sida caleemaha ay yihiin kuwo xoog leh oo si degdeg ah u koraan, oo mararka qaarkood khafiifiya. Dadka waaweyni waxay u koraan si aad u qoto dheer in dhexda of beam geedka canabku bilaabaan in ay qalalan ay sabab u tahay la'aanta qorraxda.
Xitaa haddii aadan ku daboolin clematis jiilaalka, guga waxay siin doonaa caleemaha yar yar.
Waa muhiim! Haddii jiilaalka ahaa mid aad u qabow, ka dibna clematis, waxay u badan tahay, barafoobay, laakiin ma dhiman. Xilliga qaboobaha waxaad u baahan doontaa inaad si taxadar leh daboosho.
Haddii aad clematis clematis sida qoraxda, waxaad heli doontaa duurka ubax gaaban. Clematis, ku beeray penumbra, koraa weyn, iyo cidhibku waa dheer, halka ubax waa dareere iyo khafiif ah.
Ma taqaanaa? Clematis ee kooxda Jacqumann waa in la gooyaa si nidaamka xididka si firfircoon u koraan iyo xoojiyo. Ma saameyneyso ubax.
Kooxda jilicsan ee jilicsan ee Zhakmana xagaaga hore. Waa mid aad iyo aad u taajir ah. Ilaa iyo inta ubaxu uu yar yahay, ma adkaan doonto inaad soo qabatid ubax yaraaday, oo ka caawinaya inuu soo muuqdo cusub. Marka baadiyaha waa da ', waxaa jira dhibaatooyin leh, laakiin talooyin ah ee canabkiinna ah halka ubaxyada ubaxyada la gooyaa waa la gooyn karaa, kuwa cusubna waxay ku boodi doonaan meeshihiisa xilliga dayrta.
Ololka buluugga ah. Nooca nooca clematis Jacman waxaa si fiican loogu daraa midabyo kale. Midabkeedu wuxuu si buuxda u muujiyaa xilliga dayrta. Ubaxku waa weyn yahay (illaa 18 cm), tufaaxuna waa ballaaran oo leh midab buluug ah oo leh buluugyo cadcad leh. Wixii qaab qurux badan, waa in la sii kordhiyaa taageerada joogtada ah. Wuxuu kori karaa ilaa 3 m.
Nikolay Rubtsov. Waxay leedahay burooyinkeeda ubax lilac-casaan. Xagasha Wavy. Haddii aad rabto midabyo midab leh, ka dibna waxaa lagula talinayaa in aan ku beeri duurka qorraxda. Ubaxyadu waxay u muuqdaan inay jilicsan yihiin.
Blooms si fiican. Ubaxa ugu horeeya wuxuu muuqan karaa bisha May waana inuusan luminin quruxdiisa illaa iyo Sebtembar. Daanishyada waxay abuuraan dusha sare ee "dabool", kaas oo si buuxda loogu daboolay ubax. Ubax wuxuu soconayaa 3-4 toddobaad.
Hagley Highbreed. Ubax Lilac-casaan ilaa 15 cm dhexroor, dalxiis oo ku yaal geesaha, oo leh anthers-casaan-cas. Inta ugu badan oo dhan waxay u socotaa si kala gooni ah ubaxyo kale, oo ku xiga taas oo lumisa tayada kala duwan. Xilliga jiilaalka waa in si adag loo gooyaa oo daboolaa. Wixii koritaanka, qoyaanka ciidda ayaa door weyn ka ciyaaraya.
Allaah. Ubaxyo midab casaan ah ilaa 20 cm dhexroor. Celceliska dhererka waa ilaa 1.5 m, laakiin waxay sidoo kale gaari kartaa 2 m. Ma aha sida ugu badan sida Hagley Highbreed, laakiin ubax, isagoo leh midabka dhalaalaya, si guul leh u dheelitir leh caleenta. Ku fiican qurxinta qurxinta.
Fiktooriya Ubax waa casaan-guduud ah dhexroor ilaa 20 cm. Way fiicantahay in la eego taageero hooseeya, tan iyo inta badan ubaxa waxay ku yaalaan dusha sare ee baadiyaha. Sida caadiga ah baadiyaha blooms hal mar xilli, iyo kuwa ubaxyada dhif ah ee ubaxyada dayrta ma aha sida iftiin sida xagaaga kuwa.
Habeenkii Warsaw. Ubaxa waa weyn (illaa 20 cm), midab casaan-casaan leh boorar kareem ah. Doorashada meel loo beerayo baadiyaha, waxa fiican inaad doorato asalka iftiinka (derbiga guriga, xayndaabka). Waxay kala-baxdaa bilaha Juun ilaa Oktoobar. Bloom ugu horeeya waa cufan ugu caansan, ka dibna waxay u muuqataa ubaxyo kali ah. Dalagyada xilliga qaboobaha waa inay gaaban yihiin.
Comtis de Boucho. Ubaxyo casaan leh oo leh kareemka. Dhexdhexaadiyuhu waa yar yahay, illaa 15 cm, laakiin blooms ku xoortay geedaha, mararka qaarkood xitaa caleenta lama arki karo. Waqtiga ubaxyada laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar.
Jacaylka. Mugdi madow, oo ku dhowaad madow oo leh boorar kareem iyo qaab muuqaal leh oo muuqaal ah. Yar yar, illaa 10 cm dhexroor, laakiin waxa ugu magdhow tan aan caadi ahayn midabkooda.
Clematis Vititsella oo aan qabin daryeelka. Waxay u fiican tahay labada bilowga ah iyo bannaanka u khibrad leh. Noocaan Clematis ayaa sidoo kale loo yaqaan clematis guduud.
Inkastoo dhirta liyya oo kale ah ay koraan dhererkoodu ilaa 5 m, inkastoo ubaxoodu yar yihiin, qiyaastii 5 cm dhexroor, waxay ku farxaan xagaaga oo dhan midabkooda dhalaalaya, kuwaas oo ka soo jeeda midab madow, mugdi madow oo madow ah oo ah guduud muraayado ah oo u dhow tones buluug. Ubaxa waa mid adag oo qabow u adkaysta. Daryeelka haboon wuxuu kugu farxi doonaa xilli kasta.
Clematis Vitichella wuxuu ku nool yahay Yurub kaliya, laakiin sidoo kale Aasiya.
Muujinta clematis sida waa in ay foomka ay rhizome labadii sano ee hore. Iyo horeyba u socodka saddexaad si aad u firfircoon. Clematis Violet waa qorrax-huruud, iyo tan iyo geedka aan la beerin, mid waa inuu doortaa meel qorrax leh.
Waa muhiim! Clematis guduud ma jecla draftiga.
Guga, inta lagu guda jiro muddada beerista firfircoon ee clematis, Bacriminta nitrogen waa in lagu dabaqo ciidda - taas oo si fiican u magdhabaya nafaqo la'aanta ee ciidda. Noocyo waaweyn ayaa loo baahan yahay in la quudiyo 4 jeer xilli ciyaareed, kuwa yar yar ilaa 3 jeer. Sidoo kale waxay u baahan tahay waraabin joogto ah.
Ma taqaanaa? Clematis guduud waa la kori karaa sida dhulka.
Carmencit. Geedka wuxuu koraa illaa 3 m. Ubaxku wuxuu leeyahay midabka carmine iyo qaabdhismeed xiiso leh, dhirta dhaadheer ee dhaadheer. Anther oo midab la mid ah leh petals on threads thread khafiif ah. Geedka wuxuu jecel yahay qorraxda, laakiin wuxuu noqon karaa mid tayo leh tayada celceliska ciidda. Waxay u egtahay qurxiyo iyo hareeraheeda, iyo sida warshad cagaaran.
Wil de Lyon. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee clematis. Caleemaha madow iyo casaan-madow waxay ku koraan ilaa 4 m.Dhuliyada leh dhexroor ilaa 12 cm, iyo daryeel wanaagsan iyo xaaladaha cimilada - illaa 15 cm Midabka tufaaxa waa carmine-red, talooyinka ay yihiin guduud, oo u dhowdhow - iftiin. Kaarbooyinka wanaagsan iyo hoy la'aan la'aan kuyaal dhexe, u adkaysata cuduro kala duwan, oo ay ku jiraan fungal.
Dawn. Nooca xiisaha leh clematis waa Vititsell. Ubax waa weyn, oo leh jilicsanaan casaan jilicsan oo jilicsan in cadceedda. Kareemka Anther. Waxaa la Bloomaa laga bilaabo May ilaa Agoosto on caleemaha ee sanadkan.
Alexandrite. Liana wuxuu koraa illaa 3 m. Ubax waa sepal, jeexan, midab casaan leh. Qorraxda waxay ku dabooshaa midabo madow. Caato jaalaha ah. Dhexdhexaad - illaa 14 cm, hal caleemo ayaa kori kara ilaa 10 midab. Isla mar ahaantaana waxay Bloom on caleemaha sannadkii hore. Waxay ku duugmaysaa May illaa Sebtembar.
Emilia Plater Caleemaha kala duwan ee noocaan ah, laakiin midabyada yaryar, illaa 10 cm. Ubaxu waa midab buluug ah, oo dhexda ku jira midab madow. Kareemka Anther. Midabka wuxuu ku xiran yahay sida aysidhka carrada: kan sare, tayada waxay noqon doontaa. Wuxuu koraa 4 m. Muddada ubaxu wuxuu ka bilaabmaa Juun ilaa Sebtembar.
Abaalmarinta Prince Liana wuxuu koraa illaa 2 m. Dildilo ka sameysan guduud jilicsan ilaa buluug. Qaadir - ilaa 13 cm Cream anther. Liana si wacan ayey ula socotaa dhir kale. Waxaa lagugula talinayaa in lagu beero meel u dhow deyrka iyo taageerada, laakiin sidoo kale waxaa suurtogal ah in lagu daboolo daboolka dhulka.
Noocyada nooca clematis ayaa ka soo ifbaxay natiijada clematis coutatis coolka oo leh noocyada kale. Ubax waa weyn, ilaa 20 cm dhexroor. Midabtu way kala duwan tahay midabada madow ilaa buluuga.
Xilliga jiilaalka, dhirta waa in lagu duubaa. Burooyinkeeda ubaxa ee Lanuginoza ayaa la dhigay dayrta, sidaas darteed caleemaha waxaa lagula talinayaa in la gooyaa ilaa 1 m, laakiin bannaanka qaar ka gooyay dhowr mitir oo ka soo caarada. Xilliga jiilaalka waxaad u baahan tahay inaad ka saarto caleemaha taageerada, si taxadar leh u leexiso oo u duub.
Ubaxa ugu horeeya ee clematis this waa badan oo dhalaalaya, bilaabmaa May iyo soconayaa ilaa September. Waxaa jira ubax yar oo ku saabsan afkoda, celcelis ahaan, waxaa jira ilaa dhowr darsin hal geedka.
Qiimeeyaan Daam. Wuxuu koraa ilaa 2 m. Ubaxyada isla markiiba waxay ka soo baxaan buluuga ah buluug, ka dibna waxay u rogaan cadaan. Separtu waxay koraan ilaa 15 cm dhexroor. Ubax badan ayaa sii soconaya ilaa uu baraf ugu horeysay. 2 trim kooxeed.
Waa muhiim! Plant Valge Daam wuxuu u baahan yahay meelahaas meesha ay suurtagal tahay faafitaanka faafinta ee ugu yar.
Henry. Mid ka mid ah wakiillada ugu caansan ee laga sameeyay clematis. Wuxuu koraa illaa 4 m, oo leh ubaxyo badan. Ubaxa waa weyn (illaa 20 cm), cad cad oo qadhaadh ah. Waxay u egtahay mid aad u fiican mugdiga. Waxaa fiican in ay ku beeri dhirta meelo qalalan oo aan lahayn lahayn. Marka qalajinta ciidda waa in isla markiiba loo waraabiyo. Warshad udub-udgoon leh. Waxay kala-baxdaa bilaha Juun ilaa Oktoobar.
Siebold-shuban. Liana sarreeya (ilaa 3 m), qorraxdheer. Ubaxa wuxuu u koraa illaa 17 cm dhexroor, wuxuu leeyahay jajab lilac dhalaalaya oo iftiin leh, wuxuu u dhawyahay inuu dhexdhexaadiyo. Boototi waa dhar guduudan, oo leh qoraallo kareem ah. Xilliga ubaxu wuxuu soconayaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar.
Ujeedada. Wuxuu koraa illaa 3 m. Caleemaha waa wayn, qufacin. Ubaxa waa ilaa 20 cm dhexroor. Tufaaxa ku wareegsan waxay leeyihiin midab qiiqan, taas oo caddaynaysa sida uu ubaxday. Antherh ayaa ah miro-cas, oo badan. Bloom laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Clematis Tani waxay u muuqataa weyn ee beeritaanka kaliya iyo waa ku haboon tahay balakoonyada jardiinooyinka iyo jardiinooyinka jiilaalka.
Kyllus. Qofka hooseeya, wuxuu koraa ilaa 2 m. Ubax ilaa 16 cm dhexdhexaad ah, waxay leeyihiin caro qallafsan. Muujinta jilicsan ee jilicsan ee xayawaannada qallafsan ayaa si fiican u dheelitiraya bootoolka. Qeybta dhexe ee faralku waxay u iftiimaysaa caddaan. Waxay si fiican u qaboobaan, laakiin waxay u baahan yihiin hoy. Bloom laga bilaabo July ilaa barafka ugu horeeya.
Lavson Warshadu waxay gaadhi doontaa 3 m. Ubaxku waa ballaaran yahay, ilaa 18 cm dhexroor, midab buluug ah oo buluug ah oo leh madow, kaas oo aadaya midabka asther-purple. Caleemuhu waa qufac, dhir kulul, talooyinkooda ayaa gubanaya. The ubax ugu horeysay ugu horeysay, marar dhif ah, ubax dhowr ah ka hor barafoobay.
Tani waa nooca geedeedka. Waxay u egtahay geed canab ah oo ilaa 4 m dherer ah. Si xitaa daboolay caleemo gooyn maroon. Ubax keli ah, waxay u muuqdaan inay koraan dhererka. Waxay gaaraan dhexroor ah 15 cm oo ah kareemka lilac ee midabka. Isticmaalida boodhka oo leh xargo guduudan.
Clematis noocan ah waa abaarta u adkaysta, dareemayaa weyn ee gobollada koonfurta. Goobo ciid wanaagsan oo qoyan leh alkaline dhexdhexaad ah, hodan ku humus iyo dabacsan.
Waxay Blooms on caleemaha sannadkii hore, dhif ah Bloom on sprouts ee xilligan xaadirka ah. Waxay u egtahay mid cajiib ah marinka ugu weyn, laga yaabo in dhaqanka tubbada lagu qurxiyo hoolalka, lobbies.
Ma taqaanaa? Si fiican u gudubta clematis kale. Waa waalid ka mid ah Beelaha ugu badan ee noocyada dhirta.
Barbara Dibley. The height of geedka canabka ah waa 3 m, halka baadiyaha. Ubax ee clematis this koraan ilaa 18 cm dhexroorka, si cad-qaabeeya, oo la mid ah qaabka xiddig. Moodh casaan madow leh oo u gudubta lilac, oo ah bartamaha dharka xashiishadda - burgundy. Dhejisyada casaanka ah. Waxay ku duugmaysaa May illaa Sebtembar. Wuxuu bilaabaa ubax on sprouts sannadkii hore oo sii wadaya kuwa cusub. Waxay u egtahay mid aad u fiican baaldiga balku, verandas iyo sida beerta guud.
Biz Jubili. Caleemaha noocan ah ee clematis koraan ilaa 3 m. Ubax waxaa lagu soo koobay talooyin fiiqan ilaa 18 cm dhexroor, ubaxyada sare ee geedka canabka ah. Tufaaxa waxaa lagu tilmaamaa dhinacyo kala gedisan, hoy ah oo casaan leh iyo midab casaan leh oo ku yaal bartamaha. Qalabka kareemka Anther. Waxay billaabaysaa ubax bilaha Juun ee caleemaha sannadkii hore, iyo sprouts sanadkan - laga bilaabo Julaay ilaa dhaxan.
Barbara Jacques Ubaxyo jilicsan oo leh madow mugdi ah ee dhexda ah ee jilicsan. Iyada oo dhexdhexaad ah ilaa 18 cm Si siman, laakiin aanad lahayn, dabooli dusha liana. Kiriimyada jilicsan ayaa soo daata. Geedka dhirta la mid ah ee liana-ga (ilaa 3 m). Waxay ku duuban tahay laga bilaabo May ilaa dhaxan ugu horeysay. Waxay bilaabataa ubax on sprouts sanadii hore, iyo laga bilaabo July on sprouts ee sanadkan. Ku siman beerta toosan, balakoonka qurxinta tubbada ama loggia.
Dr. Rappell. Noocyo Liana ah ilaa 4 mitir. Ubax ayaa gaaraya 18 cm, tufaaxa ayaa sarreeya oo fiiqan talooyin, khafiif ah oo casaan leh oo leh xarig dhexe oo sigaar ah. Waxay bilaabataa ubax, iyo sidoo kale wakiilo kale oo noocaan ah, caleemaha sanadka ee la soo dhaafay, iyo laga bilaabo Agoosto on xilligan cusub. Dhamaantiisuna waa mid ku habboon hal labadaba, iyo kooxo kooxeed.
Ubaxa dhagax. Si tartiib ah uguna jilicsan ee midab buluug-guduud leh oo leh xariijin guduudan oo dhexda ah iyo caraf udgoon. Waqti ka dib, ubaxa waxay u egtahay lakabyo kareem ah, oo siinaya qaabka marble ee tufaaxa. Liana wuxuu ku koraa 4 m, caleemaha midabada maroon-cas. Bloomkii ugu horeeyay waa ka badan, sanadii la soo dhaafay caleemaha. Laga soo bilaabo qeybtii labaad ee blooms xagaaga dareere ah. Waxay u egtahay mid weyn ee beerta toosan.
Lazurshtern Liana wuxuu koraa 3 m dhererka. Caleemaha maroon mugdi ah, kuwaas oo Bloom oo dhan dhererka ubaxa. Sepals wuxuu gaaraa dhexroor 20-23 cm, ballaaran oo ballaaran. Qoryaha daloolka ah ee cidhifka mugdiga ah ee buluugka ah iyo kuwa caleenta caleenta ah ayaa iftiimaya qorraxda si ay u nastaan, ubax qandho. Anther caleemo madow. Blossoms on caleemaha ee sanadkii la soo dhaafay. Ku habboon ujeeda tubta sii kordhaysa ee balalkies iyo beerta toosan.
Warshad qoryo leh oo leh caleemaha la mid ah liana. Wuxuu kori karaa ilaa 4 m, wuxuu leeyahay qallaf iyo dabacsanaan. Ubax waa yar, ilaa 8 cm dhexroorka, laga bilaabo cadaan si ay hoos u kala duwan ee beige.
Wuxuu jecel yahay ciid qoyan, loamy ciidda. Waxay si fiican u koraan meelaha qorraxda, abaarta u adkaysta.
Caleemaha diyaarinta jiilaalka waa in la gooyaa badh. Wuxuu, sida nooca clematis hore, wuxuu bilaabaa ubax on sprouts jir.
Dhamaan qurxinta qurxinta dusha sare, saliidda. Waxay u adeegtaa sida quruxda albaabyada waaweyn iyo meelo hoose. Waxay noqon kartaa warshad dhejis ah oo ku taalla goobaha, balakoonka iyo hoolalka.
Ma taqaanaa? Noocyadaas waxaa laga helay Japan intii lagu jiray qarnigii 18aad, halkaas oo lagu beeray dhirta ornamental qarniyo badan.
Daniel Deron Liana wuxuu ku koraa 3.5 m. Caleemuhu waa mid cagaaran oo casaan ah, dhalinyaro ah - miro guduud. Ubax ilaa 20 cm dhexdhexaad ah, iyadoo ay ugu horeysay xilli ciyaareedkan, Terry ama semi-double. Midab buluug-guduud ah oo iftiin u dhaw xarunta. Anther jilicsan ee hooska-cagaaran. Ku habboon beerta toosan.
Jacqueman Alba. Caleemaha waxay ku koraan ilaa 3 m. Cannaan oo ubax ah sprouts sannadkii hore way ka duwan yihiin midabada jiilka cusub. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa ilaa 14 cm. Dhirta ugu horeysa ee ubaxyada noocan ah waa geel, ilaa 27 petals ee baaquli ubax, dheeraad ah - 6-7 pcs. Tufaaxa ku yaal talooyinka ayaa lagu tilmaamaa, caddaan leh xididdada buluugga ah. Kareemka Anther. Ubax xoog leh ayaa dhacaya bisha Agoosto, laakiin ubaxyada hore waxay u muuqdaan May. Waxay si fiican u adeegtaa sidii asal u ah beeritaanka kooxdooda sababtoo ah midabada iyo foomamka waaweyn.
Zybolds Ubax-qaabeeya ubax, ilaa 9 cm dhexroor. Tufaaxa ayaa lagu tilmaamaa caleenta, cadaanyo leh astaamo guduudan. Liana wuxuu koraa illaa 4 m. Waxaa loo beeray sidii hal koox ama koox koox.
Mrs Cholmondeli. Ubax waa lafil dhalaalaya oo midabkiisu yahay, isagoo gaadhaya dhexdhexaad ah 20 cm, caleemaha sanadka ee sannadkii hore, oo ah ubaxyo badan oo ubax ah ayaa dhacaya bisha Juun. Runta labaad waa bilaha Luulyo-August, laakiin waa sii socon kartaa ilaa Sebtembar. Dhamaan qoraallada asalka ah iyo degenaansho gooni ah.
Kooxdan Clematis - "qumman". Semishrub celcelis ahaan 1.5 m dherer ahaan, mararka qaarkood waxaa jira shakhsiyaad ilaa 3 mitir ah.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee Integrifolia waa qaabka gogol-qaabka ubaxa. Dhexdhexaadiyaha ubaxyada ilaa 12 cm, dhererkoodu ilaa 8 cm, midabkoodu waa kala duwanyahay, laga bilaabo cadaan ilaa mugdi madow ee berrito. Caadi ahaan xayawaanka ubaxyada ubaxyada ah marka ay ubaxu dhacaan, sidaas darteed abuuraya "goono" agagaarka agagaarka.
Xilliga dayrta, waxay abuuraan abuur, iyo jiilaalka waxay u baahan yihiin manjooyin (nooca 2 manjooyin).
Waxaa sidoo kale jira noocyo yaryar oo kooxdan ah, laakiin way yar yihiin oo aan ku baahsanayn dhulkeenna.
Ma taqaanaa? Maaddaama dhirtaas ay xirtaan, waxay ku xirnaan karaan oo la hagaajin karaa.
Alyonushka. Waxay ku koraan jeexjeexyada, waxay gaartaa dhererkoodu waa 1.5 - 2 m. Caleenta qaabka adag (3-7 caleemo hal mid). Ubaxyada waa muraayad, oo leh dhexroor illaa 8 cm, dherer ah illaa 7 cm. Marka midabka kuleylku uu koro, iyo cidhbaha ubaxku soo saaro. Kiriim kiriim ah, huruud ah. U qalmida labada koox iyo hal beer oo labadaba.
Anastasia Anisimova. Ubax furay 14 cm oo leh hoy buluug ah oo cagaar ah, kaas oo soo jiidanaya qorraxda. By dhamaadka dhaallan ubax ay unbend soo baxay. Kareemka jilicsan ee madow. Dhirta lafteeda waa mid geed-yar (ilaa 2.5 m), caleemaha waa hoy burgundy ah. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Wanaagsan balakoonada beeraha, loggias, mid ama koox kooxeed.
Durand, Durandia. Waxaa loo tixgeliyaa jilibka ugu quruxda badan ee kooxda Itegrifolia, oo leh ubaxyo waaweyn. При распускании цветы слегка раскрыты, достигают 12 см. Лепестки эллиптические с загнутыми кончиками ярко-фиолетового оттенка, выгорают до темно-синего. Пыльник жёлтых цветов. Лиана вырастает до 2 м. Цветет умеренно. Прекрасно подходит для озеленения небольших оградок и подпорных стен.
Xusuusta wadnaha. Semishrub, koraya ilaa 2 m.Waxay leedahay caleemo maroon. Ubaxa qulqulaya, tabar-darro furan. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa 8-10 cm, dhererkoodu ilaa 9 cm, waxay leeyihiin midab lilac-buluug ah. Kareemka anther oo leh jilciso huruud ah. Waxay si fiican u Bloomaa laga bilaabo Juun ilaa Agoosto. Ku haboon tahay beeritaanka dayrarka hoose iyo taageerooyinka.
Shimbirta cawliga ah. Ubax ee foomka asalka ah. Marka ugu horeysa waa kala badh, furfurnaan, laakiin sida ay u bislaadaan, way ubaxayaan. Kordhi ilaa 14 cm dhexroor. Midabada buluug-cas, dhalaalaya. Maraq madow oo leh buluugyo buluug ah. Qodobkaan ilaa 2,5 m, wuxuu leeyahay caleemaha guduudan-maroon. Waxay ku jirtaa dhammaan xagaaga iyo qaybta bisha Sebtembar, ilaa hargabka ugu horeeya. Geedkaa duurka iyo beerta.
Roobab casri ah. Ubaxyo qaabeysan oo leh dhexdhexaad ah ilaa 6 cm, hooska buluugga ah ee cufan, kadibna dhalaalaya. Anther caleemo madow. Semishrub, koraa 1.8 m. Muddada oo dhan ubax (June-September) blooms profusely. Wanaagsan ee beerta daaqada hoose.
Clematis waa warshad aan caadi ahayn. Kala duwan ee noocyada ay yihiin waa mid cajiib ah, iyo noocyada kasta waa quruxda si ay u gaar ah. Intaa waxaa dheer, ma u baahan tahay daryeel gaar ah oo si fudud u soo kabashada - doorasho weyn oo loogu talagalay beerta khibrad leh iyo bilowga.